Person: President Robert Mugabe
Man held over Mugabe balloon remark
Police have reportedly arrested a carpenter who questioned whether Zimbabwe’s president still had the strength to blow up balloons at his 88th birthday celebrations.
Mugabe insists on March election
State media loyal to Zimbabwe’s president says he will hold elections in March to end the nation’s fragile coalition government.
Court frees dozens of Zimbabwe 'plotters'
A Zimbabwean court freed 39 of 45 people charged with plotting an Egypt-style uprising against the country’s long-time ruler, while a magistrate ordered six others to face treason charges later this month.
Militants from Zimbabwe President Robert Mugabe’s party have launched raids at boating clubs and tourism lodges on the shores of the capital’s main fishing and leisure area, tour operators said.
Registered voters dead
NEARLY one-third of Zimbabwe’s 5.5 million registered voters are dead, researchers have found.